Heeska Macaan ee Kampala Adaa Ibaday Yaa Iska Leh (Daawo Muuqaalka Heesta Macaan ee Kambaala Adaa i baday) - iftineducation.com
Ayaan Warsame Shire
iftineducation.com – Heeska kampala adaa i baday ayaa sanadkii naga dhamaaday waxaa si saaid ah u dhageysanayay lamaanayaasha is jeceyl heeskaasi oo xiligaasi musik iyo cod macaani lagu soo laray, balse fanaanada ayaan markii aay qaadeysay heeska waxey kasaartay in horay loo qaaday, xattaa mar lawareysanayay ayey waxey tiri heeska aabahey baa ii sameeyay waa qiso dhab ah kuna socotay aniga ah ayaan warsame.
Sanadii 1994 tiii ayey sahro halgan heeskan oo muuqaal ah qaaday weliba xiligaasi waxaa ku larnaa kaban balse erayada waxaa sameeyay ayaan aabaheed Abwaan Warsame Shire Cawaale.
Ayaan warsame oo dhalay Abwaankii weeynaa Ee onkod Warsame Shire Ayaa sheegtay goor dhaweyd in aay soo wado sanadkaan heeso muuqaal ah oo oo aay magacyadooda wax kaxustay Haboow, Yeelkadaa, Badqab, Gurdan.
Heeskan ayey dhalinyarada is jeceyl iyo dadka dhageystay isla dhex marayeen in lagu sameeyay erayada qaab buufis ah balse, waxaa shaki keenay heeskan in laqaaday sagaashameeyadiii.
Waxaa isa soo tarayo fanaaniin heesihii hore si qalad ah usoo qaadayo haddane isku soo magacaabayo miraha iyo laxanka heeska, sidii dalkeena loo bililiqeystay ayaa fankii horena loo bililiqeysanayaaa.
Bal nala daawo heeskan markii hadda iyo markiisii hore inkastoo laxanka meel dheer ah ku kala duwanyihiin, haddana waa isku mid dhanka laxanka iyo erayada, kadib adiga kala saar qofkii heeska leh.